Igwe ngwuputa chassis nwere oghere 55mm na interface ihu
Igwe ngwuputa chassis nwere oghere 55mm na interface ihu
Igwe a na-egwupụta akụ na-eji B85 chipset, motherboard kewara, dị mfe idowe, oghere oghere kaadị bụ 55mm, jiri bọọdụ shunt ike na-enye ikike kaadị eserese nke onwe ya, nke nwere ndị fan 8 dị ike, nwekwara ogwe ihu, chọpụta ọnọdụ ọrụ. nke kaadị eserese n'oge ọ bụla.
1. Onye na-egwuputa kaadị 8 nwere chipset B85, interface PCIE nke ala, na ndakọrịta siri ike.
2. ETH miner rig control card na-anabata nhazi azụ azụ, nke kwụsiri ike ma ghara imebi;akara akara + oghere ala efere na-anabata nkewa nkewa, nke dabara adaba maka ịrụ ọrụ na mmezi, yana adaba maka ịgbasa na mgbakọ.
3. A na-eji igbe shunt nke Ethereum mee ihe iji gbochie motherboard ka ọ ghara ibubiga ya ókè, belata ihe ize ndụ nke mmebi nne nne, ma mee ka kaadị eserese na-arụ ọrụ nke ọma.
4. N'ihu na azụ dual-ahiri fan okirikiri nhọrọ ukwuu nakweere 3500RPM elu-ọsọ Fans, ugbu a dị ka ala dị ka 0.48A, ikuku olu dị ukwuu, na ọrụ ndụ dị ogologo.
5. 55mm ndịna-emeputa kaadị oghere, dabara maka ọtụtụ kaadị eserese na ahịa.
6. A na-eme shei nke ikpe Ethereum nke 1mm na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, nke siri ike ma na-adịgide adịgide, na elu ya bụ ájá ojii.
7. Pụrụ iche n'ihu panel usoro, onwem na ndịna-emeputa kaadị na-arụ ọrụ LED ọkụ, nwere ike ịchọpụta na-arụ ọrụ ọnọdụ nke ndịna-emeputa kaadị n'oge ọ bụla, n'ihu VGA interface, USB interface, wired netwọk interface, ike interface, na-eme ihe ọ bụla ị chọrọ, ọzọ mmadụ.
1.What ego nwere ike a miner?
Nwere ike m ETH na ETC
2. Ogologo oge ole ka oge ndu ngwaahịa nkịtị na-ewe?
Enwere ike ibupu ngwaahịa ntụpọ n'ime ụbọchị 7, yana oge nnyefe nke ngwaahịa ahaziri ahazi kwesịrị ka ya na ndị ọrụ kparịta ụka.
3. Gịnị mere ị ga-eji zụta n'aka gị kama ịzụrụ n'aka ndị ọzọ na-ebubata ihe?
Na 2015, anyị malitere itinye aka na nyocha na mmepe, mmepụta na ahịa nke ngwaahịa ndị metụtara blockchain Mining Machine, nwere ahụmahụ mmepụta ọgaranya na ahụmahụ ahịa.Tụkwasị na nke ahụ, anyị nwere ndị ọkachamara mgbe-ahịa na-azụ ahịa na ndị ahịa mba ọzọ iji hụ na onye ahịa ọ bụla nwere ahụmahụ ịzụ ahịa kacha mma.
Nke gara aga: gpu mining rig nwere oghere kaadị nke 65mm
Osote: 1600W ike ọkọnọ maka gpu miners
Motherboard 8 kaadị in-line / PCIE/ oghere 55mm
Ịnye ọkụ 4U: 1600W
Ogologo kaadị nkwado Ihe na-erughị 295mm
Onye ofufe 8 Fan (DN12cm) 3500RPM
Ike SW SW*1
AC interface AC*1
Ihe eserese kaadị ibu LED LED * 8
Nha chassis 660mm(L)*400mm(W)*170mm(H)
Igwe na-egwuputa ihe bụ ngwaahịa ahaziri ahazi dị ka ihe ndị ahịa chọrọ, nke nwere ọkwa ụfọdụ, na ọnụahịa ga-agbanwe na mgbanwe nke ahịa, biko gosi na anyị tupu ịkwụ ụgwọ.